साझा यातायात चढ्नु हुन्छ ? यस्तो नियम ल्याउदै छ « Devoted for Economic Devlopment, आर्थिक विकासको लागि समर्पित
साझा यातायात चढ्नु हुन्छ ? यस्तो नियम ल्याउदै छ
२१ फाल्गुन २०७४, सोमबार १८:२५
ललितपुर । साझा यातायातले आफ्ना यात्रुका लागि टिकट अनिवार्य लिनुपर्ने नियम बनाउने भएको छ । टिकट नलिने यात्रु र नदिने कर्मचारीलाई कारवाही गर्ने तयारी गरिएको कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेन्द्रराज पाण्डेयले बताउनुभयो । साझा यातायातमा चढ्दा कतिपय यात्रुले टिकट बेवास्ता गरेकाले टिकट नलिने÷नदिनेलाई कारवाहीको व्यवस्था गर्न लागिएको हो । “यात्रुले टिकट लिन गाह्रो मान्ने गरेका छन्”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “यात्रुमा टिकट लिएर मात्र यात्रा गर्नुपर्छ भन्ने धारणा भइसकेको छैन ।”
साझा यातायातले नेपाल बैंक लिमिटेड र नेपाल टेलिकमसँगको सहकार्यमा विद्युतीय टिकट प्रणाली (इटिकेटिङ) समेत शुरु गर्ने तयारी गरेको छ । रासस
प्रकाशित : २१ फाल्गुन २०७४, सोमबार १८:२५